Ku saabsan Tenerife
[vc_row] [vc_column] [vc_column_text]Tenerife waa jasiirad foolxun oo ku taal badweynta Atlantik oo ay iska leeyihiin Beesha Iskeed u Leedahay Jasiiradda Canary (Spain) iyo Midowga Yurub. Waxay ku fadhisaa dhul qiyaastii 2000 sqkm ah. waxayna leedahay dad ku dhow 900.000 oo qof. Tenerife waa goob dalxiis oo caan ah waxayna qaadataa qiyaastii 6.000.000 booqdeyaal sanadle ah.
Tenerife waxay caan ku tahay “jasiiradda guga weligeedba”. Cimiladeeda jilicsan ayaa waxaa sameeyay dabaylo ganacsi, duruufo iyo buuro u kala qaybiya jasiiradda meela kala duwan oo cimilo. Xilliga dabaasha ee Tenerife waa sanadka oo idil celcelis ahaanna heerkulku waa 21C.
Jasiiraddu waxay si wanaagsan u horumarisay kaabayaasha dhaqaalaha: laba garoon diyaaradeed oo casri ah, laba dekedood oo waaweyn iyo marino badan, wadooyin waaweyn oo leh xawaare 120 km / h ah, jardiinooyin qaran, isbitaallo, iskuulo iwm. Jasiiradaha Canary si fiican ayey ugu xiran yihiin doomaha iyo duulimaadyada maxalliga ah waxaana jira boqolaal ee duullimaadyada caalamiga ah ee maalinlaha ah ee lagu sameeyo dhammaan waddamada Yurub oo ay maamusho dhowr shirkado diyaaradaha duulista ah.
Tenerife waxay leedahay cilmiga deegaanka oo dhan maadaama aysan jirin warshado culus ama warshado waaweyn. Badiyaa markasta waxaa jira hawo cusub oo wareegaya oo ka socota badda dhexdeeda iyadoo ay ugu wacan tahay dabaysha ganacsiga.
Heerka dambiga waa mid aad u hooseeya guud ahaan jasiiraduna waa mid aad u aamin ah oo aamin ah.
Jasiiradaha Canary iyo Tenerife waa barta ugu koonfur ee Midawga Yurub waana meesha ugu kululaysan Yurub xilliga jiilaalka. [/ Vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row]
2020 XNUMX ATLAS Tenerife® Hanti Ma-Guurtada, Dhammaan Xuquuqda ayaa Leh. Back to top